❣️ အမြတ်နိုးဆုံးသော ❣️ - Loey_B_Hyun - Wattpad
❣️ အမြတ်နိုးဆုံးသော ❣️
85.4K 13.6K 36
HAPPY ENDING | BL/OC Main Pairing : Augustus Lumen Artorius x 林血花
ဗီလိန္​မာယာ 【FOD Zawgyi】
1.2M 110K 78
1.2M 109K 90
(Unicode & Zawgyi) ဒန်နရယ် (Daniel) သည် စွမ်းအင်တန်ခိုး ဘာဆိုဘာမှမရှိသည့် လူသားကောင်လေးတစ်ယောက်။ ဖရက်ဒီ (Freddy) ကမူ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို သွေးချောင်းစီးစေနိုင်သော စေတန်နတ်၏ တစ်ဦးတည်းသော သားငယ်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦး၏ ကံကြမ္မာမှာ ရှုပ်ထွေးသော ချည်ခင်တစ်ခုလို ရောယှက်ဆက်စပ်လာသောအခါ...
243K 28.6K 45
(Unicode & Zawgyi) Black Angel ရဲ့ Season2ဇာတ်လမ်းအဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Black Angel ကို အရင်ဖတ်ပြီးမှ ဒီ ဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်ပေးကြပါလို့.... ချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်လျက် အကြင်နာမွန် Black Angel ရဲ႕ Season2ဇာတ္လမ္းအဆက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္ Black Angel ကို အရင္ဖတ္ျပီးမွ ဒီ ဇာတ္လမ္းေလးကို ဖတ္ေပးၾကပါလို႔.... ခ်စ္ခင္ေက်းဇူး...
624K 124K 80
Unpretty Romance[ ChanBaek ]
2.1M 160K 57
ChanBaek Romance in Unpretty Life ( side couple - KaiHun )
Scum Villain's Self Saving System Extra
110K 7.7K 6
ဒါက main story မဟုတ္ပါဘူး... extra ေလးပါ! Extra ဆုိတဲ့အတုိင္းပဲ Main story ကို ဖတ္ထားမွ နားလည္မွာေလးေတြ ရွိပါတယ္! Main story ကို မဖတ္ရေသးရင္ေတာ့ 🚨 Spoiler Alert ပါလို႔! 《 Unicode 》 ဒါက main story မဟုတ်ပါဘူး... extra လေးပါ! Extra ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ Main story ကို ဖတ်ထားမှ နားလည်မှာလေးတွေ ရှိပါတယ်! Main story ကို မဖတ်...
The Scum Villain's Self-Saving System 《မြန်မာ||ျမန္မာ》
2.9M 373K 83
Title - The Scum Villain's Self-Saving System 《မြန်မာဘာသာပြန်|| ျမန္မာဘာသာျပန္ (ZawGyi+Unicode)》 ⚠️WEEKLY UPDATE⚠️ native title - 人渣反派自救系统 Author - MoXiangTongXiu Tags - Chinese, light novel,fantasy, romance,comedy,cultivation world, Yaoi/ Boylove Source: BC Novel English ver. can be read at www.novelupdate.com Syno...
Mo Dao Zu Shi ( Grandmaster of Demonic Cultivation ) 魔道祖师《 Myanmar Translation 》
397K 18K 28
This is justaBurmese Translation of Mo Dao Zu Shi 魔道祖师 written by Author MoXiangTongXiu ✨ > Genre : Chinese , Action , Adventure , Fantasy , Romance , Comedy , Historical , Shounen Ai / Boys Love ✨ Source : Exiled Rebels Scanlations You can read english version on https://exiledrebelsscanlations.com/ Without fu...
1.2M 196K 96
Heaven Official's Blessing『墨香铜臭's 天官赐福』
3.9M 445K 141